အာရေဗျပင်လယ် « MMWeather Information BLOG
Leaveacomment ဆောင်းပါး Cyclone Naming, ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်, အာရေဗျပင်လယ် ပင်လယ်(၄)ခုဖြတ်သန်းခဲ့သည် 30W – မှတ်တမ်း
Leaveacomment မှတ်တမ်း 30W, ထိုင်းပင်လယ်ကွေ့, ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်, ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်, အာရေဗျပင်လယ်, တောင်တရုတ်ပင်လယ် အာရေဗျပင်လယ်နှင့် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှ INVEST 96A နှင့် INVEST 97B တို့၏ အခြေအနေခန့်မှန်းချက်
လေဖိအားနည်းဆဲလ် INVEST 97B တို့သည် မုန်တိုင်းငယ်များအဆင့်သို့ မရောက်ရှိနိုင်သော်လည်း အားအကောင်းဆုံးအခြေအနေသို့ ရောက်ရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း GFS ကွန်ပျူတာမော်ဒယ်မှ WUND တွင် ခန့်မှန်းပုံဖေါ်ထားပုံဖြစ်ပါသည်။
SYSTEM 96A နှင့် 97B တို့၏ ညာဘက်ခြမ်းလေတိုက်နှုန်းမှာ 96A ဘက်တွင် တစ်နာရီ ၃၅-၄ဝ မိုင်နှုန်းအထိရှိသော်လည်း 97B ဘက်တွင် တစ်နာရီ ၂ဝ-၂၅ မိုင်နှုန်းအထိသာရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။ ထိုင်းမိုးလေဝသဌာန Chart တွင် ဇွန်လ ၃ ရက် ညနေ ၁၈၃ဝ နာရီ၌ 97B ၏ ဗဟိုလေဖိအား 998hPa သို့ ကျဆင်းလျှက်ရှိကြောင်း ဖေါ်ပြထားပါသည် – LINK
GFS ကွန်ပျူတာမော်ဒယ်၏ Raw Data loading လုပ်ချိန်မှ . . . → Read More: အာရေဗျပင်လယ်နှင့် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှ INVEST 96A နှင့် INVEST 97B တို့၏ အခြေအနေခန့်မှန်းချက်
Leaveacomment MODEL-FORECAST, မုန်တိုင်းဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြေ, လေဖိအားနည်းဆဲလ် 96A, 97B, ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်, အာရေဗျပင်လယ်, လေဖိအားနည်းဆဲလ် - LPC မုတ်သုံဝင်ရောက်ချိန်နှင့် အိန္ဒိယ သမုဒ္ဒရာ အခြေအနေ
Leaveacomment ပင်လယ်ပြင်အခြေအနေ SST, ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင် အပူချိန်, ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်, အာရေဗျပင်လယ်, အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာ Copyright © 2017 MMWeather Information BLOG Log in - All Rights ReservedPowered by WordPress & the Atahualpa Theme by BytesForAll. Discuss on our WP Forum